Honor9Lite က ၂ သိန်းကျော်ဝန်းကျင်မှာ ရွေးချယ်စရာဖုန်းတစ်ခုဖြစ်လာမလား?
5 Oct 2018 . 11:30 AM
ငွေကျပ် ၂ သိန်းဝန်းကျင်ဟာ စမတ်ဖုန်းအသစ်တစ်ခုကိုဝယ်ဖို့စဉ်းစားနေတဲ့သူတွေအတွက် ထိပ်ဆုံးကစဉ်းစားဖြစ်မယ့် ဈေးတစ်ခုဖြစ်မှာပါ။ ဒီဈေးဝန်းကျင်မှာ စမတ်ဖုန်းဝယ်မယ်ဆိုရင် ရွေးချယ်နိုင်တဲ့ဖုန်းတွေအများအပြားရှိနေတဲ့ထဲကမှ Honor က ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Honor9Lite ဖုန်းအကြောင်းကို အဓိကပြောသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
အခု Honor9Lite စမတ်ဖုန်းက မြန်မာနိုင်ငံဈေးကွက်ထဲမှာ ငွေကျပ် ၂၁၉,၀၀၀ ကျပ်နဲ့ ရောင်းချနေတဲ့စမတ်ဖုန်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ ပေးရတဲ့ဈေးနဲ့ယှဉ်မယ်ဆိုရင် ပေးရတာတန်တယ်လို့ ပြောလို့ရတဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ရှိတဲ့စမတ်ဖုန်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် Honor9Lite ဖုန်းကို ဝယ်ဖို့စဉ်းစားနေတဲ့သူတွေဆိုရင် ဘာကြောင့်ဒီ Honor9Lite ဖုန်းက ဝယ်ယူသင့်သလဲဆိုတဲ့အချက်တွေကို ကြည့်လိုက်ရအောင်။
Honor9Lite စမတ်ဖုန်းဟာ ဒီဇိုင်းပိုင်းမှာတော့ လက်ထဲကိုင်လို့တော်တော်လေးကိုကောင်းတဲ့ Glass Front & Back Cover နဲ့ Aluminum Frame ကို အသုံးပြုပြီး တည်ဆောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ Notch ပါဝင်ခြင်းမရှိတဲ့အတွက် Display က ဖုန်းကိုယ်ထည်ရဲ့ ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းကို နေရာယူထားပြီးတော့ ဘေးဘောင်တွေကလည်း သေးငယ်တယ်လို့ပြောနိုင်ပါတယ်။
ဖုန်းရဲ့နောက်ကျောဘက်မှာကလည်း Dual Camera နဲ့ Fingerprint Scanner ကို ထည့်သွင်းပေးထားပြီးတော့ ဖုန်းရဲ့ MicroUSB ၊ Audio Port ၊ Speaker နဲ့ Mic Port တွေကို ဖုန်းရဲ့ အောက်ခြေမှာပဲတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Honor9Lite စမတ်ဖုန်းဟာ Full HD+ Resolution ရှိတဲ့ 5.65″ 18:9 Ratio Display ပါဝင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ ဒီဈေးဝန်းကျင်မှာ တော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေတဲ့ အရည်အသွေးရှိတယ်လို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ Notch မပါတဲ့အတွက် Display မှာ သိသိသာသာ Cutout မရှိတာကလည်း ပိုပြီး အဆင်ပြေတယ်လို့ ပြောလို့ရပါတယ်။
Camera ပိုင်းကတော့ Honor9Lite ရဲ့ အဓိကအားသာချက်လို့ပြောနိုင်ပြီးတော့ ဖုန်းရဲ့ အရှေ့ဘက်မှာရော အနောက်ဘက်မှာရော 13MP + 2MP Dual Camera တွေကို တပ်ဆင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအတွက် စုစုပေါင်း ကင်မရာ ၄ လုံးပါဝင်မှာဖြစ်သလို ကင်မရာပိုင်းမှာလည်း အရည်အသွေးတော်တော်လေးကို ကောင်းတာကိုတွေ့ရပါတယ်။
Portrait Shot တွေကို စိတ်ကြိုက်ရိုက်ကူးလို့ရသလို Pro Mode လည်းပါဝင်တဲ့အတွက် ISO ၊ Shutter Speed စတဲ့ Setting တွေကို Manual ချိန်ပြီး ရိုက်ကူးချင်တဲ့သူတွေအတွက်တော်တော်လေးကို အဆင်ပြေပါတယ်။
စွမ်းဆောင်ရည်ပိုင်းမှာတော့ Honor9Lite စမတ်ဖုန်းက Kirin 659 Processor ကိုပဲ အသုံးပြုထားပြီးတော့ လက်ရှိ Snapdragon Processor တွေနဲ့ ယှဉ်မယ်ဆိရင် အားနည်းတယ်လို့ ပြောနိုင်ပေမယ့် ပုံမှန်အသုံးပြုမယ့်သူတွေအတွက်ကတော့ အဆင်ပြေပါသေးတယ်။ RAM အနေနဲ့ 3GB ၊ Storage 32GB ပါဝင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ MicroSD Card ကနေ ထပ်ပြီး တိုးချဲ့လို့ရဦးမှာပါ။
တခြားအချက်တွေအနေနဲ့ကတော့ 3000mAh Battery ပဲပါဝင်တဲ့အတွက် နည်းပါးတယ်လို့ ဆိုနိုင်ပြီးတော့ MicroUSB ကိုပဲ အသုံးပြုထားတာတွေက အားနည်းချက်လို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် လက်ရှိ ၂ သိန်းကျော်တန် တခြားဖုန်းတွေထက် Honor9Lite ဟာ Design ပိုင်းပိုမိုလှပပြီးတော့ ကင်မရာပိုင်းအရလည်း ပေးရတဲ့ဈေးထက်ပိုကောင်းတဲ့အတွက် တကယ်လို့ကိုယ်က Screen Size သေးသေးနဲ့ လက်တဖက်ထဲကိုင်လို့အဆင်ပြေတဲ့ဖုန်းတစ်ခုကို ရှာနေတယ်ဆိုရင် Honor9Lite က ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်တဲ့ဖုန်းတစ်ခုလို့ သတ်မှတ်ရမှာပါ။
ငှကေပျြ ၂ သိနျးဝနျးကငျြဟာ စမတျဖုနျးအသဈတဈခုကိုဝယျဖို့စဉျးစားနတေဲ့သူတှအေတှကျ ထိပျဆုံးကစဉျးစားဖွဈမယျ့ စြေးတဈခုဖွဈမှာပါ။ ဒီစြေးဝနျးကငျြမှာ စမတျဖုနျးဝယျမယျဆိုရငျ ရှေးခယျြနိုငျတဲ့ဖုနျးတှအေမြားအပွားရှိနတေဲ့ထဲကမှ Honor က ထုတျလုပျထားတဲ့ Honor9Lite ဖုနျးအကွောငျးကို အဓိကပွောသှားမှာပဲဖွဈပါတယျ။
အခု Honor9Lite စမတျဖုနျးက မွနျမာနိုငျငံစြေးကှကျထဲမှာ ငှကေပျြ ၂၁၉,၀၀၀ ကပျြနဲ့ ရောငျးခနြတေဲ့စမတျဖုနျးတဈခုဖွဈပွီးတော့ ပေးရတဲ့စြေးနဲ့ယှဉျမယျဆိုရငျ ပေးရတာတနျတယျလို့ ပွောလို့ရတဲ့ စှမျးဆောငျရညျရှိတဲ့စမတျဖုနျးတဈခုလညျးဖွဈပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ Honor9Lite ဖုနျးကို ဝယျဖို့စဉျးစားနတေဲ့သူတှဆေိုရငျ ဘာကွောငျ့ဒီ Honor9Lite ဖုနျးက ဝယျယူသငျ့သလဲဆိုတဲ့အခကျြတှကေို ကွညျ့လိုကျရအောငျ။
Honor9Lite စမတျဖုနျးဟာ ဒီဇိုငျးပိုငျးမှာတော့ လကျထဲကိုငျလို့တျောတျောလေးကိုကောငျးတဲ့ Glass Front & Back Cover နဲ့ Aluminum Frame ကို အသုံးပွုပွီး တညျဆောကျထားတာဖွဈပါတယျ။ Notch ပါဝငျခွငျးမရှိတဲ့အတှကျ Display က ဖုနျးကိုယျထညျရဲ့ ၇၅ ရာခိုငျနှုနျးကို နရောယူထားပွီးတော့ ဘေးဘောငျတှကေလညျး သေးငယျတယျလို့ပွောနိုငျပါတယျ။
ဖုနျးရဲ့နောကျကြောဘကျမှာကလညျး Dual Camera နဲ့ Fingerprint Scanner ကို ထညျ့သှငျးပေးထားပွီးတော့ ဖုနျးရဲ့ MicroUSB ၊ Audio Port ၊ Speaker နဲ့ Mic Port တှကေို ဖုနျးရဲ့ အောကျခွမှောပဲတှရေ့မှာဖွဈပါတယျ။
Honor9Lite စမတျဖုနျးဟာ Full HD+ Resolution ရှိတဲ့ 5.65″ 18:9 Ratio Display ပါဝငျမှာဖွဈပွီးတော့ ဒီစြေးဝနျးကငျြမှာ တျောတျောလေးကိုအဆငျပွတေဲ့ အရညျအသှေးရှိတယျလို့ ပွောလို့ရပါတယျ။ Notch မပါတဲ့အတှကျ Display မှာ သိသိသာသာ Cutout မရှိတာကလညျး ပိုပွီး အဆငျပွတေယျလို့ ပွောလို့ရပါတယျ။
Camera ပိုငျးကတော့ Honor9Lite ရဲ့ အဓိကအားသာခကျြလို့ပွောနိုငျပွီးတော့ ဖုနျးရဲ့ အရှဘေ့ကျမှာရော အနောကျဘကျမှာရော 13MP + 2MP Dual Camera တှကေို တပျဆငျထားတာဖွဈပါတယျ။ အဲ့ဒီအတှကျ စုစုပေါငျး ကငျမရာ ၄ လုံးပါဝငျမှာဖွဈသလို ကငျမရာပိုငျးမှာလညျး အရညျအသှေးတျောတျောလေးကို ကောငျးတာကိုတှရေ့ပါတယျ။
Portrait Shot တှကေို စိတျကွိုကျရိုကျကူးလို့ရသလို Pro Mode လညျးပါဝငျတဲ့အတှကျ ISO ၊ Shutter Speed စတဲ့ Setting တှကေို Manual ခြိနျပွီး ရိုကျကူးခငျြတဲ့သူတှအေတှကျတျောတျောလေးကို အဆငျပွပေါတယျ။
စှမျးဆောငျရညျပိုငျးမှာတော့ Honor9Lite စမတျဖုနျးက Kirin 659 Processor ကိုပဲ အသုံးပွုထားပွီးတော့ လကျရှိ Snapdragon Processor တှနေဲ့ ယှဉျမယျဆိရငျ အားနညျးတယျလို့ ပွောနိုငျပမေယျ့ ပုံမှနျအသုံးပွုမယျ့သူတှအေတှကျကတော့ အဆငျပွပေါသေးတယျ။ RAM အနနေဲ့ 3GB ၊ Storage 32GB ပါဝငျမှာဖွဈပွီးတော့ MicroSD Card ကနေ ထပျပွီး တိုးခြဲ့လို့ရဦးမှာပါ။
တခွားအခကျြတှအေနနေဲ့ကတော့ 3000mAh Battery ပဲပါဝငျတဲ့အတှကျ နညျးပါးတယျလို့ ဆိုနိုငျပွီးတော့ MicroUSB ကိုပဲ အသုံးပွုထားတာတှကေ အားနညျးခကျြလို့ ပွောနိုငျပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ လကျရှိ ၂ သိနျးကြျောတနျ တခွားဖုနျးတှထေကျ Honor9Lite ဟာ Design ပိုငျးပိုမိုလှပပွီးတော့ ကငျမရာပိုငျးအရလညျး ပေးရတဲ့စြေးထကျပိုကောငျးတဲ့အတှကျ တကယျလို့ကိုယျက Screen Size သေးသေးနဲ့ လကျတဖကျထဲကိုငျလို့အဆငျပွတေဲ့ဖုနျးတဈခုကို ရှာနတေယျဆိုရငျ Honor9Lite က ထညျ့သှငျးစဉျးစားသငျ့တဲ့ဖုနျးတဈခုလို့ သတျမှတျရမှာပါ။